Efa ela no nitaky ny hanesorana ny Praiministra !
Tao anatin’ny fivoriana mangina nataon’ny birao foiben’ny antoko MFM niaraka tamin’ireo filoha mpitarika isam-paritra nandritra ny roa andro teny Maibahoaka Ivato no nivoahan’ny ady hevi-pitakiana maro tokony hataon’izao fanjakana izao. Tsy mihemotra tamin’ireo fitakiana maro efa nataony ity antoko MFM ity, toy ny fanaovana ny "Amnistie" faobe, ny fitantanana mangarahara, ny fampiatoana ny fanamparam-pahefana amin’ireo fitaovam-panjakana isan-karazany.
Ireo no isan’ny navoitran’ingahy Manandafy Rakotonirina omaly tamin’ny famaranana ilay nantsoin-dry zareo hoe : Fivoriana fampitoviana tadin-dokanga, tsy mifanipaka amin’ny hevitry ny filoha Ravalomanana ny hevitr’ity antoko ity hoy ihany ireo mpitarika, ary ho arovan’izy ireo ny hisian’ny demokrasia eto Madagasikara.
Manao antso avo ity antoko ity ny mba hisian’ny fifampidinihana haingana, satria toa manangasanga ny ady an-trano, ny antony dia tsy mety miresaka ny TIM sy ny Arema izay ireo no miantoka ny filaminana eto. Mbola ao anatin’ny fitakian’izy ireo ihany koa ny handinihana haingana sy akaiky ny raharaha depiote Herihajaina satria toa ny Praiministra Jacques Sylla no mitsivalana amin’ny fanafahana ity depioten’ny Kalamavony ity raha ny resaka tany Antsiranana ny 21 Jona 2005 teo no asian-teny. Tsy nisalasala ny filohan’ny MFM Manandafy Rakotonirina nilaza, fa efa hatramin’ny ela ity antoko notarihany ity no nitaky ny hialan’ingahy Praiministra amin’ny toerany.
Fa raha hitodihana kely ny raharaha 2002, dia amin’ny fitokanana ny tetezana ao Fatihita no tokony ho avy eny avokoa ny hery rehetra na ireo nanapaka na ihany koa ny mpanamboatra ny efa nikoro mba hivoady fa hiray hina tanteraka ary hanao famonoan’omby ho mariky ny fifamelana, ary omby gasy io, fa tsy omby vavy be ronono, ka samy hibanjina ny ho avy amin’izay ny rehetra, fa tsy hamboly korontana sy fifandrangitana lava eto. Ireo raha fintinina ny hevitra nivoaka tao amin’ny fihaonan’ny antoko MFM teny Maibahoaka Ivato ny 2-3 Jolay teo.
madagascar tribune 04/07/05 -